Svutugadzike - Wikipedia
vanhu vachi korora svutugadzike
Svutugadzike (ku Chingezi: tea) kana tii; tiyi chinwiwa chinofarirwa neruzhinji hwe vanhu pasirose. Inogadzirwa nekunyika mashizha akaoma kana maruva edzinze Musvutugadzike mumvura inopisa. Svutugadzike inema mandorani, mapfuwira, kana runga yemichero, senge ndimu. Svutugadzike dzese dzinogadzirwa nedzinde re Camellia sinensis.
Dzimwe nguva shoko rekuti "svutugadzike" rinoshandiswa zvimwe zvinwiwa zvinonyukwa mu muchero kana mandorani emvura inopisa, senge "svutugadzike ye rosehip", kana "svutugadzike ye camomile". Aya anonzi "svutugadzike dzendorani".
1 Mhando ye svutugadzike
2 Manwiro anoitwa svutugadzike
3 Svutudzake ye kuEzhiya
Mhando ye svutugadzike[chinja | edit source]
Tarisai futi peji re: Svutugadzike zerere ne svutugadzike tema
mashizha ekugadzira svutugadzike ye zere
Bhobha - mhando ye svutugadzike
Pane mhando mbiri dze svutugadzike: svutugadzike tema ne svutugadzike zerere.
Kugadzira svutugadzike tema, vashandi vanotora mashizha vachima tambaradza pama sherufu paanokwanisa kuoma. Vanotevera neku ma rolla uye nekuma mhedura mumagwishu, uye wobva vamaisa mukhamuri maano anonwirira (absorb) oksijeni. Riyekisheni ye mushonga inoshandura raviro ne stayera ye svutugadzike. Pekupedzisira mashizha anooma nemweya unopisa kusvika aita ruvara rwembise kana rutema. Svutugadzike tema zhinji inobva ku Siri Ranga (Siri Ran'ka), Indonezhiya ne Mabvazuva eAfurika. Kana mashiza esvutugadzike tema ava brewed mumvura inofanza, svutugadzike inogadzirwa nemashizha acho inenge iri tsvuku, saka imwe zita rinoshandiswa pamusoro pesvutugadzike tema, kunyanya muChayina, isvutugadzike tsvuku,
Svutugadzike zere inogadzirwa nekuisa mazhisha matsva mustima (steamer), izvi zvinoita kuti ave zerere. Anobva azotswanywa uye owomeswa muovheni. Indiya ndiyo musika hombe uye vashandisi vesvutugadzike zere.
Svutugadzike inowanzo mereswa ku Chayina, Indiya, Pakistani, Siri Ranga, Taiwani, Japani, Nepawu, Ostireriya, Ajendina ne Kenya.
Manwiro anoitwa svutugadzike[chinja | edit source]
Svutudazike inonwiwa ichipisa. Ku Chamhembe ne Mabvazuva eAfurika inowedzerwa mukaka pamwe ne chokera nemamwe wo marunga.
Nyika imwe ne imwe ine magadzirirwo anoitwa svutugadzike zvichienderana ne tsika dzavo. Vamwe vanoinwa isina chinhu kunyangwe chikafu, vamwe vanoinwa nechokera chete.
Raviro neruvara rwesvutugadzike unoshanduka sezvo mashizha anogara mumvura inopisa. Kunyorerwa kwekafeni kunonzwika pakutanga, saka kana mumwe munhu achida kuchangamuka (activate) mumwe msaka (effect) anogona kunwa svutugadzike yakaenderana mamineti 1-2 chete. Kana mashizha akagara kwenguva yakareba, mamwe ma ndoranishonga (herbicides) anoparara uye mishonga iyi inogona kudzora msaka we kafeni uye inotounza manzwiro ekusununguka. Huwandu hweruvara rwesvutugadzike hausi chiratidzo chemawandiro ekafeni iri mukati ne chikusvo che msaka.
Ku Mabvazuva ePakati, mashizha esvutugadzike kazhinji anonyikwa mumvura inotonhora nemvura yakafanzwa.
Ku Rhashiya ne Pezhiya poto diki ye svutugadzike yakasimba inotsvetwa muketero hombe yemvura inopisa inonzi samovar. Huwandu shoma hwe svutugadzike unotsvetswa mukomichi kana girazi uye yozadzwa mvura inopiswa.
Ku Yuropu vanhu vanoisa mashizha mumvura inenge ichifanza mamineti mashoma. Vangezi ne Vafirisiya (Frisians) vanoisa mukaka kana ruomba, nemuto wendimu ushoma, nechokera.
Svutudzake ye kuEzhiya[chinja | edit source]
Tarisai peji re Bhobha
Svutugadzike ye mukaka
↑ stimulant mu Chishona inonzi 'Chikusvo'
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Svutugadzike&oldid=93089"
This page was last edited on 31 Kurume 2022, at 12:48.